Adobe Lightroom nohavaozina tamin'ny kinova 2.1 miaraka amin'ny vaovao | Androidsis
Toa toa hametraka ny batery farany i Adobe amin'ny farany Izy io dia hitondra antsika fanavaozana vaovao amin'ny Android matetika. Zavatra iray izay natokana ho antsika na toy ny famolavolana sary dia ho mora raisina, satria mifampiraharaha amin'ny orinasa tsara indrindra natokana ho an'ity karazana programa ity miaraka amin'ny traikefa lehibe sy ilay iray izay azo antoka fa tena nilanja an'ity sehatry ny endrika ity ary hatsaran-tarehy hita maso miaraka amin'ny fampiharana toa Photoshop, Illustrator ary maro hafa.
ankehitriny ho avy ny fanavaozana vaovao ho an'ny iray amin'ireo fampiharana Adobe tsara indrindra ho an'ny fanarenana sary. Ity dia Adobe Lightroom ary havaozina amin'ny kinova 2.1 miaraka amin'ny fanatsarana miharihary ny interface sy ny fahaizana izao dia manome ny mpampiasa handika ny toe-javatra avy amin'ny sary iray hametahana azy ireo amin'ny iray hafa. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manitsy sary amin'ny fomba haingana kokoa fa tsy mila mijanona mandritra ny segondra mba hamerina ireo masontsivana tsy manam-paharoa heverinay fa ny tsara indrindra ho an'ity karazana sary mety ho nalainay ity.
1 Adobe Lightroom 2.1 mahery kokoa
2 Fanamboarana bibikely sy interface tsara nohatsaraina
Adobe Lightroom 2.1 mahery kokoa
Ankehitriny tsy misy isalasalana fa raha misy orinasa na orinasa te-ho eo amina fitaovana an-tapitrisany maro eran'izao tontolo izao dia tsy maintsy mijery ny Android toa ny iOS ihany izy. Efa hitantsika izany vao tsy ela akory izay miaraka amina fampiharana Cloud Creative efatra vaovao avy amin'ny Adobe misy amin'ny Android izao. Ka hery sy fikirizana no hiseho avy amin'ity ekipa manan-danja ity handefa vaovao matetika matetika. Manantena aho fa tsy ho ela, afaka taona maro, azontsika atao ny milaza fa manana fanontana ifotony toy ilay azontsika namboarina tao amin'ny kinova desktop. Fa ny efa voalaza dia mbola misy sisa tavela.
Ny zava-baovao manaitra indrindraAnkoatry ny fanarenana bibikely marobe dia ireto:
Amboary haingana kokoa ny sary amin'ny alàlan'ny fandikana ny sary ary apetaho amina sary hafa
Tapao tsara ny sary miaraka amin'ny traikefa nohavaozina ao amin'ny fitaovanao Android izay mamela ny fanitsiana haingana sy ny fanitsiana
Tadiavo mora foana ireo sary tianao indrindra. Ny fomba fijery mizarazara vaovao amin'ny fanangonana dia manolotra fomba hafa hijerena sy hisafidianana sary
Fanohanana rakitra RAW ho an'ny fakantsary Panasonic Lumix CM1
Ny zava-baovao lehibe amin'ity fanavaozana ity dia ny fandikana ny toerana hahafahanao mandefa ny masontsivana fenon'ny iray amin'ireo fanovantsika amin'ny sary hafa, mba hahafahan'izy ireo manitsy mba hahitsy tsara kokoa. Mba hidirana amin'ity fampiasa ity dia tsindrio lava ny sary.
Fanamboarana bibikely sy interface tsara nohatsaraina
Ireto ambany ireto dia tanisiko ireo bibikely raikitra, zavatra misy fiheverana manokana rehefa tonga be dia be izy ireo rehefa mitranga amin'ity kinova 2.1 ity. Midika izany fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiharana Tsy maivana velively izy io, ka arakaraka ny maha avo ny fampisehoana azy no hahamora kokoa ny fanararaotana betsaka azy io.
A koa fiheverana manokana ny fomba fijery vaovao izay mamela ny fidirana haingana amin'ireo sary rehetra ananantsika tao Lightroom. Ary inona no holazaina fa raha te hahay be indrindra amin'ny fampiharana ianao dia ilaina ny famandrihana Creative Cloud.
Hoy aho, fanavaozana ny Lightroom vaovao izay manaraka mampiseho ny fahalianana sy ny ho avy lehibe rehetra miandry antsika amin'ny famolavolana avy amin'ny fitaovana Android miaraka amin'i Adobe.
Nivadika fotsy ny écran indraindray rehefa avy nanova ny orientation.
Mety hianjera tampoka ny Lightroom rehefa tonga eo amin'ny bokotra fidirana ny mpampiasa.
Mamaha olana iray izay mety hiteraka olana rehefa mandehandeha amin'ny famoriam-bola lehibe iray ary manova ny fizoran'ny efijery ny fitaovana.
Ny bokotra miverina ara-batana dia tsy nanidy ny menozian'ny toe-javatra.
Fahombiazana tsy dia tsara rehefa mifamadika amin'ny sary iray mankany amin'ny iray hafa.
Ny fandikana na famindrana sary amina fanangonana hafa dia tsy mandeha tsara. Amin'ny takelaka Samsung ihany no mitranga izany.
Indraindray ny lightroom dia miteraka fidirana an-tsokosoko.
Fanovana tsy hita rehefa nozaraina tamina fampiharana sy serivisy an'ny antoko fahatelo ny sary.
Nisy fanidiana tsy mandeha amin'ny laoniny rehefa nivezivezy indraindray avy teo amin'ny zana-kazo mankany amin'ny fijerin'ny fanangonana.
Lightroom Photo- & Video-Editor
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Adobe Lightroom dia havaozina amin'ny kinova 2.1 miaraka amina fandikana kopia, fanatsarana ny interface ary maro hafa
Ny sary Google+ dia mikatona amin'ny 1 Aogositra, ny fotoana hifindranao amin'ny Google Photos